Ahotoso ne nkwagye dwom (1-21)
Yah Yehowa ne daa Botan no (4)
Asaase sofo besua adetrenee (9)
“W’awufo benya nkwa” (19)
Monkɔhyɛ mpia mu na momfa mo ho nsie (20)
26 Ɛda no, wɔbɛto dwom yi+ wɔ Yuda asaase so:+ “Yɛwɔ kurow a ɛyɛ den.+ Ɔde nkwagye ayɛ n’afasu ne n’akoban.*+ 2 Mummue apon no+ mma ɔman trenee no mmra mu,Ɔman a edi nokware no. 3 Wɔn a wɔde wɔn ho to wo so koraa no,* wobɛbɔ wɔn ho ban;Wobɛma wɔn asomdwoe daa,+Efisɛ wo na wɔde wɔn ho to wo so.+ 4 Momfa mo ho nto Yehowa so daa,+Efisɛ Yah* Yehowa ne daa Botan no.+ 5 Wɔn a wɔte baabi a ɛwɔ soro, kurow a ɛkorɔn no mu no, wabrɛ wɔn ase. Wama ahwe ase,Wama ahwe fam,Wama ahwe mfuturu mu. 6 Nan betiatia so,Abrɛfo nan, ahiafo anammɔn.” 7 Ɔtreneeni kwan yɛ tẽẽ.* Esiane sɛ woteɛ nti,Wobɛma ɔtreneeni kwan so ada so. 8 O Yehowa, bere a yɛnam w’atemmu kwan so no,Yɛn ani da wo so. Yɛn* ani agyina wo din ne wo nkae.* 9 Edu anadwo a, me nipadua* nyinaa ani gyina wo,Na me honhom kɔ so hwehwɛ wo;+Efisɛ wubu asaase atɛn a,Asaase sofo sua adetrenee.+ 10 Sɛ wɔdom ɔbɔnefo mpo a,Ɔrensua adetrenee.+ Trenee asaase so mpo, obedi amumɔyɛsɛm,+Na ɔrenhu Yehowa kɛseyɛ.+ 11 O Yehowa, woama wo nsa so, nanso wonhu.+ Wobehu sɛnea wode ahokeka di ma wo man, na wɔn ani bewu. Yiw, wo gya bɛhyew w’atamfo. 12 O Yehowa, wobɛma yɛn asomdwoe,+Efisɛ biribiara a yɛayɛ biara,Wo na woayɛ ama yɛn. 13 O Yehowa yɛn Nyankopɔn, w’akyi no, atumfo bi nso adi yɛn so,+Nanso wo nko ara na yɛbɛbɔ wo din.+ 14 Wɔawuwu, na wɔrentena ase. Wɔyɛ awufo a wonni tumi biara; wɔrensɔre.+ Efisɛ wode w’ani asi wɔn so Sɛ wobɛsɛe wɔn na wɔn din ayera. 15 O Yehowa, woama ɔman no ayɛ kɛse,Woama ɔman no ayɛ kɛse;Woahyɛ wo ho anuonyam.+ Woatrɛw asaase no ahye nyinaa mu kɔ akyirikyiri.+ 16 O Yehowa, bere a wohuu amane no, wɔdan baa wo nkyɛn;Bere a woteɛɛ wɔn so no, wɔbɔɔ mpae besebesee wɔn ano.+ 17 Sɛnea ɔpemfo a awo aka noTe awo mu yaw* na ɔteɛteɛ mu no,Saa ara na wo nti yɛayɛ, O Yehowa. 18 Yenyinsɛnee, yɛtee awo mu yaw,*Nanso ɛte sɛ nea yɛawo mframa. Yɛmfaa nkwagye mmaa asaase no so, Na wɔnwoo obiara sɛ ɔntena asaase no so. 19 “W’awufo benya nkwa. M’afunu* bɛsɔre.+ Monsɔre na mommɔ ose,Mo a mote mfuturu mu!+ Wo bosu te sɛ anɔpa bosu,*Na asaase bɛma awufo a wonni tumi biara no aba nkwa mu.* 20 Me man, monkɔ, monkɔhyɛ mo mpia muNa monto mo apon mu wɔ mo akyi.+ Momfa mo ho nsie kakraNkosi sɛ abufuhyew no betwam.+ 21 Hwɛ! Yehowa fi ne tenabea rebaAbɛma asaase no sofo abu wɔn bɔne ho akontaa,Na asaase no bɛma ne mogyahwiegu ada adiNa ɛrenkata wɔn a wɔakum wɔn no so bio.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Wɔn a wɔn koma si pi no.”
^ Anaa “pɛpɛɛpɛ.”
^ Kyerɛ sɛ, ma wɔnkae Onyankopɔn ne ne din anaa ma nkurɔfo nhu Onyankopɔn ne ne din.
^ Nt., “Afunu a ɛyɛ me dea.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “nwura (ɛfan) so bosu.”
^ Anaa “Na asaase bɛwo awufo a wonni tumi biara no.”